Zvinyorwa zvaRyan Smith pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Ryan smith
Ryan ndiye maneja weSocial Media neBusiness Development kuRaidious. Iye inyanzvi yehukama neruzhinji anonyanya kushandisa masocial media seyekushambadzira ekutaurirana chombo. Ryan ane ruzivo mumitambo, zvematongerwo enyika, zvivakwa, uye mamwe maindasitiri mazhinji.
Chipiri, January 29, 2013 Chipiri, January 29, 2013 Ryan smith
Zvemagariro midhiya ndezvevanhu. Isu tese takanzwa izvo zvakapetwa kani miriyoni. Chikonzero isu tese takanzwa izvi kane miriyoni ndeyekuti ndiwo wega wega mutemo wenguva dzose unogona kuratidzwa nezve zvemagariro venhau chero munhu. Dambudziko guru randinoona nguva zhinji nderekuti vanhu vari kutaura kune vateveri vavo pane kutaura navo. Munguva pfupi yapfuura, takawana chichemo chevatengi paTwitter nezve mumwe wevatengi vedu.
Zvemagariro Midhiya Ndiyo Nyowani PR
Muvhuro, September 20, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Ryan smith
Ini nguva pfupi yadarika ndakadya masikati nevamwe vangu vandinoshanda navo muhukama neruzhinji, uye semazuva ese hurukuro yakatendeukira kumatekiniki nemaitiro anoshandiswa muindastiri yedu. Sega iyeye muboka anoshandisa vezvenhau seye chete nzira yekutaurirana kwevatengi, chikamu changu chehurukuro chingaite kunge chidimbu cheboka. Izvi zvakazoonekwa kuti hazvisi izvo, uye zvakandiita kuti ndifunge: Zvemagariro enhau hazvisisipo
Muvhuro, Nyamavhuvhu 23, 2010 Svondo, October 4, 2015 Ryan smith
Hazvisi nyore kukudziridza hombe vateveri base pa Twitter. Nzira iri nyore kubiridzira uye kutambisa mari yako kutenga zviuru zvevateveri kubva kune imwe yeaya "mabhizinesi" epamhepo anopa mabasa akadaro. Chii chinowanikwa kubva mukutenga vateveri? Saka ko kana uine vateveri zviuru gumi nezvishanu vasina hanya nebhizinesi rako uye neshoko rauri kutaurirana? Kutenga vateveri hakushandi, nekuti kuve nekutevera kukuru pane
Chitatu, July 28, 2010 Svondo, Nyamavhuvhu 19, 2012 Ryan smith
Unoda kuziva chikamu chakanakisa chekushandisa vezvenhau sechikamu chenyu mushandirapamwe wehukama neruzhinji? Iko hakuna mitemo. PR vanhu vanogara vachirangarirwa nezvemitemo. Tinofanira kutevera AP Stylebook, kuburitswa kwenhau kunofanirwa kunyorwa neimwe nzira uye kuurayiwa pane dzimwe nguva. Zvemagariro midhiya mukana wekambani yako kutyora muforoma uye kugadzira zvakasarudzika zvemukati izvo zvinonyanya kukosha kune veruzhinji. Izwi rakakosha